यस्ता पुरुषले सधैँ पाउँछन् प्रेममा सफलता ! श्रीमतीलाई सधैँ खुशी राख्छन्….::Leading Nepal News
यस्ता पुरुषले सधैँ पाउँछन् प्रेममा सफलता ! श्रीमतीलाई सधैँ खुशी राख्छन्….
एजेन्सी । भनिन्छ मानिस प्रेममा अन्धो हुन्छ । यसैकारणले पनि आजकल मायापिरति गाँस्ने र ब्रेकअप हुने कुरा सामान्य भइसकेको छ ।केटाकेटीबिच ब्रेकअव हुनु त सामान्य नै हो तर विवाहपछि पनि श्रीमान् श्रीमतिबिच सम्बन्ध टुट्यो भने यसले पूरै जिन्दगीमा कठिनाइको पहाड खडा गरिदिन सक्छ । त्यसैले विवाह जस्तो जीवनकै ठूलो निर्णयलाई हामीले हावामा लिनु हुँदैन । आचार्य चाणक्यले यस्ता केही कुराहरु बताएका थिए, जसले सम्बन्ध टुट्नबाट बचाउँछ । चाणक्यले पुरुषलाई चार प्रकारमा व्याख्या गर्दै उनीहरु प्रेममा सधैं सफल हुने बताएका थिए । उनका अनुसार यस्ता पुरुषले आफ्नो सम्बन्धलाई सधैँ बचाइराख्छन् । तल पढ्नुहोस्ः
स्त्रीलाई सम्मान गर्ने पुरुषः यस्ता पुरुष जो सधैं स्त्रीलाई सम्मानको नजरबाट देख्छन् । प्रेमिका होउन् या पत्नी, यदि उनलाई सम्मान दिन्छन्, उनको महत्वलाई सम्झिछन् भने त्यस्ता पुरुषको सम्बन्ध कहिल्यै टुट्दैन ।
पराई स्त्रीलाई स्पर्श नगर्नेः यो गुण सबैभन्दा सर्वोपरी हो, जो पुरुष आफ्नी प्रेमिका या पत्नीको अलावा कुनै पनि अन्य स्त्रीलाई वासनाको नजरले हेर्दैनन्, कुनै पनि पराई स्त्रीप्रति आकर्षित हुँदैनन् , उनी आफ्नो सम्बन्धलाई जोगाउन हरेक अवस्थामा तयार हुन्छन् र सक्षम पनि हुन्छन् ।
सुरक्षाको महशुषः जो पति या प्रेमी आफ्नो साथीलाई सुरक्षाको महशुष गराउँछन् उनीहरु प्रेमको मामलामा कहिल्यै हार्दैनन् । यस्तो पनि भनिन्छ कि, हरेक स्त्री आफ्नो पतिमा आफ्नो पिताको छायाँ देख्छिन् । यदि तपाई उनीसँग सुरक्षात्मक व्यवहार गर्नुहुन्छ भने उनी निश्चिन्त भएर तपाईको साथमा रहनेछिन् ।
शारीरिक सुखः वैवाहिक सम्बन्धमा शारीरिक सुख र सन्तुष्टिको आवश्यकता पर्छ । यसैले जो पुरुषले भौतिक र भावनात्मक शुखसँगै आफ्नो जीवनसाथीलाई शारीरिक सुख र सन्तुष्टि प्रदान गर्छन्, उनकी पत्नी तथा प्रेमिका सधैं खुशी रहन्छिन् र सम्बन्ध प्रगाढ रहन्छ । यो पनि पढ्नुहोस्…..
ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार यी ४ राशीका केटाहरुले श्रीमतीलाई अत्यन्तै माया गर्छन् !
श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँच्ने चाहाना सबैमा हुनु स्वभाविक नै हो तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठेस लाग्छ भने कसैको चाँहि पुरा हुन्छ । कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीको इच्छा चाहनाको ख्यालै नगर्ने स्वार्थी हुन्छन् भने कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीलाई सुखी र खुशी राख्न कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन् ।ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार कसैले सुखी र खुशी खोजेर मात्रै पाउने होइन त्यो त आफ्नो ग्रह दशा र राशिअनुसार जुर्नु पर्छ । यहाँ हामी त्यस्ता राशि भएका पुरुषहरुको बारेमा कुरा गर्न गैरहेका छौं जसले श्रीमतीलाई हर समय हर सम्भब खुशी राख्न चाहन्छ ।ज्योतिष शास्त्रअनुसार यी ४ राशिका पुरुषहरुले श्रीमतीलाई अत्यन्तै माया गर्छन्ः
१.मेष राशीः यो राशी हुने व्यक्तिहरुको पति पत्नी बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनाले एकअर्काको प्रेममा पागल हुने गर्छन् । एकअर्काको समस्या बुझ्ने र एक अर्काको समस्या पुरा गर्न सक्ने भएको हुनाले उनीहरुको व्यवहार पनि अत्याधिक राम्रो हुने गर्छ । यो राशी भएका पुरुषहरु बफादार हुने भएकाले पत्नीसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने गर्छ ।
२.वृश्चिक राशीः यो राशी भएको पुरुष सबैको प्यारो हुने गर्छन् । आफ्नो जिम्मेवारी प्रति बफादार हुने भएकाले परिवारको मात्र नभएर समाज प्रति पनि निकै जिम्मेवारी रही हेरचाह गर्ने गर्छन् । सामाजिक काममा सधै व्यस्त रहने भएकाले यो राशी भएका व्यक्ति मान सम्मान पाउने गर्छन् । परिवारको प्यारो मान्छे पत्नीहरुको प्रेममा पागल हुने गर्छन् भने एकअर्कालाई राम्रो सँग बुझेको हुन्छन् त्यसकारण उनीहरुले सखी जीवन बिताएका हुन्छन् ।
३.कन्या राशीः खुल्ला हृदय भएका यो राशीका पुरुषहरुको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ । उनीहरु आफ्नो पत्नीको प्रेममा गहिरोसँग डुबेका हुन्छन् । घरायासी काम बाहेक सामाजिक काममा पनि अग्रसर रहने हुनाले मान र प्रतिष्ठा पाउने गर्छन् ।
४.सिंह राशीः उक्त राशी भएका पुरुषहरु पत्नीले भन्दा बढी माया गर्ने गर्छन् । तर यो राशी भएका पुरुषहरु अरु राशी भएका भन्दा जिद्दी र रिसालु स्वभावका हुन्छन् । यो राशी भएका पुरुषहरुको जोडी एकअर्कालाई बुझ्न सक्ने भएकाले उनीहरुको घर व्यवहार सहज ढंगले चलाउन सक्छन् ।